मौसमी प्रतिकूलताको असर हवाई उद्योगमा
काठमाडौँ, पुस २५ गते । तराई क्षेत्रमा आएको मौसमी प्रतिकूलताले हवाई उडानमा ठूलो असर परेको छ । आन्तरिक उडानको सेवा दिँदै अधिकांश विमान सेवाका उडान गत सातादेखि रद्द भइरहेका छन्् ।
नेपालको आन्तरिक उडानमा नेपाल वायुसेवा निगम, बुद्ध, यति, सौर्य, श्री, समिटलगायतका एअरलाइन्सले सेवा दिँदै आइरहेका छन् । धनगढी, नेपालगञ्ज, भैरहवा, भरतपुर, सिमरा, जनकपुर, विराटनगर र भद्रपुर हाल सञ्चालनमा रहेका विमानस्थल हुन् । ती क्षेत्रमा दैनिक कम्तीमा ६० वटा उडान स्थगित हुँदा यात्रुलाई ठूलो समस्या परेको छ भने विमान कम्पनीहरूले पनि घाटा व्यहोर्दै आएका छन् । साना ठूला जहाजबाट यी उडानमार्फत तीन हजार व्यक्तिले सेवा लिने गरेका बताइएको छ ।
मौसम प्रतिकूलताले उडान भर्न नसक्दा व्यावसायिक र सुरक्षाका दृष्टिले हिउँदका तीन महिना र वर्षात्का दुई महिना नेपाली वायुसेवा कम्पनीका लागि निकै चुनौतीपूर्ण मानिन्छन् । यो अवधिमा विमान सेवा कम्पनीले लक्षित कारोबार गर्न नसक्दा करोडौँको घाटा हुने गरेको पाइएको छ ।
हिउँदका मङ्सिर, पुस र माघ तथा वर्षात्का साउन र भदौ मौसमका कारणले उडान भर्न नसक्दा वायुसेवा कम्पनीको व्यवसाय निकै खुम्चिन पुग्छ भने यात्रुले पनि समयमा उडान नहुँदाको यथेष्ट पीडा भोग्नु परिरहेको हुन्छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा. ऋषिराम शर्माका अनुसार वर्षको पाँच महिना वायुसेवा कम्पनीका लागि व्यावसायिक चुनौतीका महिना हुन् । वर्षात्का समयमा पहाडमा कुहिराले ढाक्ने र हिउँदमा तराई छोप्ने बाक्लो हुस्सु र तुवाँलोले उडान सेवा अवरुद्ध गरेको हुन्छ ।
गत मङ्गलबारदेखि विशेष गरेर तराई र चुरे तथा शिवालिक क्षेत्रमा बाक्लो हुस्सु, तुवाँलो लागेकाले सबै वायुसेवा कम्पनीका उडान सेवा प्रभावित भएका हुन् । तराईका प्रमुख सहरलाई केन्द्रित गरेर उडान सेवा दिँदै आएको सौर्य एअरलाइन्सका बजार व्यवस्थापक मुकेश खनालका अनुसार यो हप्ता त तराईका सबै विमानस्थल प्रायः बन्द जस्तै रहेकाले उडान ठप्प नै भयो । जसले गर्दा विमान सेवा कम्पनीलाई आर्थिक मार त प¥यो नै, अर्काेतिर यात्रुले पनि विमानस्थल आउने र उडान नहँुदा फर्किनुपर्ने पीडाले सताएको छ ।
गत बिहीबारबाट धनगढी उड्न दैनिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्ने र फर्केर होटल बस्नु परेको पीडा पोख्दै रमेश कठायतले भन्नुभयो, “आमाको अप्रेसन गरेर घर फर्किन थालेको थिएँ । बिहीबारबाट उड्न पाइन्छ कि भनेर दैनिक एअरपोर्ट आउँछु तर हरेक साँझ सुन्धाराको होटलमा बास हुने गरेको छ । बसमा जाउँ भने वृद्धा आमाको भर्खर अप्रेसन गरेकोले जान सकिएको छैन । ”
रमेशजस्तै गत शुक्रबारदेखि सोमबार दिउँसोसम्म जनकपुर उड्न नपाएको पीडा पोख्दै अमरेन्द्र झाले भन्नुभयो, “सुत्केरी श्रीमतीलाई सजिलो होला भनेर प्लेनको टिकट लिएँ, प्लेन उड्ला भन्दाभन्दै आउँदा र जाँदा नै बढी दुःख भोग्न थालियो । ”आन्तरिक उडानमा प्रायःजसो सबै क्षेत्रमा उडान सेवा दिँदै आएको बुद्ध एअरका बजार निर्देशक रुपेश जोशीले भन्नुभयो, “हामीले तराईका सबै रुटमा मात्र दैनिक कम्तीमा २८ वटा उडान गर्ने गरेका छौँ । यो हप्ता त मुस्किलले एक÷ दुई ठाउँबाहेक अरू रुटमा उडान हुनसकेन । पोखरा र भरतपुर त कहिल्यै नरोकिने फ्लाइट यो पटक उड्न सकेन । ”
आन्तरिक उडान सेवामा जेट विमानको सेवा पहिलोपटक दिइरहेको सौर्य एअरलाइन्सले पूर्वको भद्रपुरदेखि पश्चिमको धनगढीसम्म उडान भर्ने गरेको छ । सौर्यका बजार व्यवस्थापक खनालले भन्नुभयो, “दैनिक ३५० यात्रु बोक्ने हाम्रा जहाजले उड्न नपाएपछि कम्पनीलाई व्यावसायिक रूपमा घाटा भएको होला र कति यात्रुले सास्ती भोग्नु परेको होला ? अनुमान गर्नसकिन्छ । ”
यति एअरलाइन्सका बजार व्यवस्थापक राजेन्द्र शर्माका अनुसार तराईका प्रमुख सहरमा यतिले दिने सेवामा यो हप्ता मुस्किले १० प्रतिशत मात्र दिएको छ ।